DEG-DEG:- Sacuudi Carabiya oo xayiraadii ka qaaday xoolihii uu ka dhoofsan jiray Soomaliya. | puntlandi.com
DEG-DEG:- Sacuudi Carabiya oo xayiraadii ka qaaday xoolihii uu ka dhoofsan jiray Soomaliya.
Riyaadh (Puntlandi) Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa si rasmi ah u shaacisay inay xayiraadii ka qaaday dhoofka xoolaha Soomaaliya.
Wasiirka xoolaha, daaqada, iyo dhirta, Sheikh Nur Mohamed Hassan, ayaa ku dhawaaqay go’aankaan, kaasoo daba socday wada xaajoodyo dowladda Sacuudigu ka yeelatay arrinkaan.
Sacuudi Carabiya ayaa horey u mamnuucay dhoofinta xoolaha Soomaalida bishii Sebtembar ee sanadkii 2016, ka dib markii ay soo saareen warbixinno ka dhan ah cudurka Rift Valley ee ku badan xoolaha Geeska Afrika.
“Saraakiisha Sacuudigu waxay ogaadeen in xoolaha Soomaaliya ay yihiin caafimaad,” ayuu yidhi wasiirka xoolaha Sacuudiga.”
Dowladda Sacuudigu waxay tusaale usoo qaadatay in Soomaaliya ay xoolo 5,000 u dhoofisay dalka Imaaraatka Carabta, iyadoo intaas ku dartay in dhawaan ay si degdeg u bilaabandoonaan xoolihii ay ka dhoofsan jireen Soomaaliya.
In ka badan hal milyan oo xoolo Ari’ ah ayuu Sacuudigu dhoofsandoonan inta lagu guda jiro labo bilood oo bishaan ka bilaabanaysa.
Soomaaliya ayaa xilligaan xoolaha u dhooofisa, Masar, Oman iyo Yemen, si kastaba ha ahaatee Sacuudi Carabiya, ayaa ogsoon in Soomaaliya ay tahay isha ugu weyn ee ay ka dhoofsan jireen xoolaha nuucyadii kala duwan.